Activities Archives - ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး
သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ်မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ် ပြုလုပ်ခြင်း
21st Anniversary of Pa-O Youth Organization
PYO မှ ဦးဆောင်၍ ဒေသလူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခြင်း
Youth and Peace Application form
Pa-O Youth Organization (PYO) YouTube Channel
ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံက်င္းပ
ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ဆီဆိုင္)
ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္)
Vision/ Aim – To empower youths to become leaders and establishanew society based on the principles of freedom, equality, justice and peace.
ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း ********************************** ၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသအလိုက် လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တက်ရောက်လာသည့် လူငယ်များ စွမ်းရည်ပြည့်ဝလာပြီး၊ အရည်အချင်းဖြည့်ပြီးသော လူငယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့ လူအဖွဲ့စည်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာစေရန်နှင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် စသည့် […]
Posted in Activities, NewsTagged , 2020 Peace2020 PYO Youth and Peace Training2020 Youth2020 Youth&PeacePYO Youth and Peace TrainingYouth and PeaceYouth and Peace TrainingYouth&PeaceYouth&Peace TrainingLeaveacomment
သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ်မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် PDF file https://www.paoyouth.org/wp-content/uploads/2019/12/Development-Forum-Statement.pdf
Posted in Activities, NewsTagged , Development Forum StatementPYO Development Forum StatementLeaveacomment
Unicode ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ် ကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသအတွင်းရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေနှင့် အခြားဒေသရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ရန် နှင့် မိမိတို့လိုအပ်သည့် ကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးရေးပုံံစံကို ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကရင်နီ၊ ရှမ်း ၊ ကရင် ၊ ပအိုဝ်း နှင့် တအာင်း စသည့်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းအရာနှင့် […]
Posted in Activities, NewsTagged , Development ForumDevelopment Forum PYOPYO Development ForumPYO Taunggyi Development Forumဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဖိုရမ္Leaveacomment
မင်္ဂလာပါ လာမည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး၏ ၂၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်ရှိပါသောကြောင့် အဝေးရောက် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး၏ အဖွဲ့ဝင် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး ********************* ZawGyi မဂၤလာပါ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံး၏ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပမည့္အစီအစဥ္ရွိပါေသာေၾကာင့္ အေဝးေရာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံး၏ အဖြဲ႕ဝင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္းပါဝင္တက္ေရာက္နိုင္ရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ […]
Posted in Activities, NewsTagged , 21st Anniversary of Pa-O Youth Organization4 December PYO AnniversaryDecember4PYO anniversaryPYO anniversaryLeaveacomment
Unicode ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် လူငယ်များ ဒေသအဆင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို ့တွင် ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ လူငယ်သည် အဓိက အင်အားစုများဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၆ဝရာခိုင်နှုန်းသည် လူငယ်များသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် လူငယ်များသည် ငြိ်မ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတ်သိကျွမ်းကျင်သောလူငယ်များ ရှိသော်လည်း အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော အပိုင်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု မရှိသလောက်နည်းပါးကြောင်း စသည့် ဆွေးနွေးချက်များတွေ့ရှိရပါသည်။ “ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ […]
Posted in Activities, NewsTagged , Community Youth and PeaceCommunity Youth and Peace MeetingPYO Community Youth and Peace MeetingPYO မွ ဦးေဆာင္၍ ေဒသလူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းYouth and Peaceေဒသလူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းLeaveacomment
လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းလျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း ********************************************************* လာမည့် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ် မှ ဇွန်လအထိ တွင် လူငယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းကျောင်းကို စတင်ဖွင့် လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းချိန်ကို ၃ လ၊လက်တွေ့ ၃လ စုစုပေါင်း အချိန် ၆ လ ကြာမြင့်မှာဖြစ်သည်။ ဤသင်တန်းကျောင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် လူငယ်များပိုမိုပါဝင် လာနိုင်အတွက် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည် ဗဟုသုတများ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေးအခေါ်ပိုင်ဆိုင်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်။ ။ […]
Posted in Activities, NewsTagged , formTraining formYouth and PeaceYouth and Peace Training FormLeaveacomment
အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါ…… ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး၏ YouTube Channel ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ဝင်ရောက်ကြည့်အားပေးပြီး LIKE & Share, SUBSCRIBE လေးတွေပြုလုပ်ထားပါ နောက်ကျနော်တို့ တင်မည့် ဗွီဒီယို လုပ်ရှားမှုများကို ကြည့်ရှုလို့ရအောင်….. ……………………………………………………….. ကားကအဝ်ႏမင်္ဂလာႏဒျာႏဩ ယိုနဝ်ꩻနီသွဉ်းသီး ပအိုဝ်ႏလိုꩻယွဲးစွိုꩻ YouTube Channel ဒျာႏနဝ်ꩻသွူဩ ထွားဖေႏအာႏဗဲင်းနီသွဉ်းသီး PYO Channel ယိုဩ… နဝ်ꩻထွူတဲ့ အွဉ်ႏဖေင်ꩻ Like & Share, SUBSCRIBE ခါꩻမွိုန်းနဝ်ꩻသနဲ့ဩ….. မဉ်ႏမာꩻခါꩻ Like […]
Posted in Activities, NewsTagged , 2019 Channel2019 PYO channelChannelPa-O Youth Organization ChannelPYO 2019PYO ChannelPYO TV ChannelLeaveacomment
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ (၂၁) ရက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) ညီလာခံကို ယေန႔ ျသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕အတြင္း႐ွိ ေနာင္ကြတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳခဲ့သည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) ညီလာခံ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
Posted in Activities, NewsTagged , 5th PYO Conference5th PYO Conference 2019 StatementPYO Statementသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္Leaveacomment
ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံက်င္းပ _________________________________________ ျသဂုတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ။ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး(PYO) ညီလာခံကို ယေန႔ ျသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕အတြင္း႐ွိ ေနာင္ကြတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ေလ့လာသူမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။တဆက္တည္းတြင္ ညီလါခံအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း ၊အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမ်ားမွ မိတ္ဆက္ျခင္း ၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားစသည့္ အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးမွေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာမ်ား […]
Posted in Activities, NewsTagged , 5TH PYO CONFERENCE 2019conference 2019PYO conference 2019PYO CONFERENCE PINLON 2019Leaveacomment
11/ July/ 2019 ခုႏွစ္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ ဘုရားျဖဴခန္းမတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အ စည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ဦးစီးၿပီး ေဒသခံမ်ားကို ေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူဦးေရ က်ား (၄၀) ဦး၊ မ (၃) ဦး၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၄၃) ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္တြင္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္ႏိုင္မွ ေတာင္သူေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ ေျမအေပၚ မွာပဲ အေျခခံၿပီး စားေသာက္လုပ္ကိုင္ေရၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္သူေတြ […]
Posted in Activities, NewsTagged , Hsi Hseng Land and Strategic Planning WorkshopLand and Strategic Planning WorkshopWorkshopေဆြးေႏြးပြဲေျမယာႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲLeaveacomment
PYO Activities Photos
PYO Membership Form
Send to: pyorg.net@gmail.com
2019 PYO Publication
ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ စာအုပ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာ 2018
Our land Report Briefer in english
တီက်စ္ေျမမွေခါင္းေလာင္းသံ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဘိန္းႏြံတြင္းက ငိုရႈိက္သံ - အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု
၁ ) မာတိကာ ေခါင္းစဥ္အက်ဥ္း
၂) အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု
Lesson learn from Burma Biggest Coal Mine (Tigyit)
Download Poison Could English
Download Poison Could Burmese
Download in Burmese Download in English
______________________ Holding Our Ground
Pa-O Representative 2015
Copyright © 2019 Pa-O Youth Organization. All rights reserved. | Theme: eMag by eVisionThemes
Chat with PYO